အချစ် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ အားသာချက်တွေ ကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ – Shwe Yoe
အကယ်ဒမီ မေမေမယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ် ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိ ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေမေ မယ်လိုဒီက မကြာသေးခင် ကာလတုန်းက အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးသားလေး တစ်ယောက်နဲ့အတူ Single mother အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။
မေမေ မယ်လိုဒီက အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုလည်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လေးကကျစ်လစ်ပြီး ရုပ်ရည်ကလည်း နုပျိုလှပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ လတ်တစ်လောမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားရတာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူမကိုယ်တိုင်ဆော့ထားတဲ့ Tiktok လေးတွေနဲ့ အမြဲတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်နော်.. တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို Instagram မှာ တင်ပေးပါသေးတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ မယ်လိုဒီက ” သူမက အချစ်နဲ့ ပက်သက်ရင် အရမ်းကို တဟ်ဖက်ကမ်းလွန်အောင်ချစ်ပြီး ရိုတတ်တဲ့အပြင် . သူမမှာ ရိုလွန်းလို့ အရမ်းကိုမောလာတဲ့အကြောင်းကို့ ပြန်တင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။သူမတင်လာတဲ့ အောက်မှာတော့ သူမကိုအချစ်တွေနဲ့ စနောက်ထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မယ်လိုဒီ လိုရိုတတ်အောင် သင်ယူကြပါအုံးနော်..
အကယျဒမီ မမေမေယျလိုဒီကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယျစုနှဈ ကြျောတိုငျအောငျ ရုပျရှငျကားကွီးတှမှော ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျခဲ့ပွီး ခုခြိနျထိ ပရိသတျမြားရဲ့ အခဈြကို ပိုငျဆိုငျထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။မမေေ မယျလိုဒီက မကွာသေးခငျ ကာလတုနျးက အိမျထောငျရေး အဆငျမပွဖွေဈပွီးသားလေး တဈယောကျနဲ့အတူ Single mother အဖွဈ ရပျတညျပွီး အေးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနသေူဖွဈပါတယျ။
မမေေ မယျလိုဒီက အနုပညာအလုပျတှေ ကိုလညျး ပွနျလညျလုပျဆောငျနပွေီး ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကိုလဲ လုပျကိုငျနသေူဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးကို လိုကျစားတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကကဈြလဈပွီး ရုပျရညျကလညျး နုပြိုလှပနတောပဲဖွဈပါတယျ။ မယျလိုဒီကတော့ လတျတဈလောမှာ အနုပညာ အလုပျတှကေို ရပျနားထားရတာလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ သူမကိုယျတိုငျဆော့ထားတဲ့ Tiktok လေးတှနေဲ့ အမွဲတငျပေးဖွဈပါတယျနျော.. တဈခါတဈရံမှာလညျး သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုလေးတှကေို Instagram မှာ တငျပေးပါသေးတယျ။
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ မယျလိုဒီက ” သူမက အခဈြနဲ့ ပကျသကျရငျ အရမျးကို တဟျဖကျကမျးလှနျအောငျခဈြပွီး ရိုတတျတဲ့အပွငျ . သူမမှာ ရိုလှနျးလို့ အရမျးကိုမောလာတဲ့အကွောငျးကို့ ပွနျတငျလာခဲ့ပါသေးတယျ။သူမတငျလာတဲ့ အောကျမှာတော့ သူမကိုအခဈြတှနေဲ့ စနောကျထားပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး မယျလိုဒီ လိုရိုတတျအောငျ သငျယူကွပါအုံးနျော..
ဖွေးဥနုထွတ်နေတဲ့ အတွင်းသားအလှတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ Mဆိုင်းလု ရဲ့ ပုံရိပ်များ
မိမိုက် လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ကြွေဆင်းသွား စေ မယ့် ခက်ဝေမိုးသူ
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှပေါ်လွင်နေ တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ဗီဒီယို